Gudiga Gurmadka Qaran oo baaq soo saaray. – Hornafrik Media Network
Gudiga Gurmadka Qaran oo baaq soo saaray.
By HornAfrik	 On May 2, 2018
Hornafrik-Guddiga Qaran ee gurmadka Fatahaadaha oo dhawaan uu magacaabay Ra’iisul wasararaha xukuumada federaalka Soomaaliya, Mudane Xassan Cali Kheyre, ayaa Maanta yeeshay Kulankii ugu horeeyay oo uu shir gudoominayay Kusimaha Ra’iisul wasaaraha ahna Ra’iisul Wasaare ku-xigeen, Mahdi Maxamed Guuleed (khaddar).
Hoos ka arag kalana deg Macluumaadka halka lacagaha ku shubi karto si aad u gurmado.
Haweeney u shaqeyneysay hey’ad sama fal oo goordhaw Muqdisho lagu dilay.